भक्तपुरका निवा शाक्यहरुको ४ सय वर्ष अघिको इतिहास सम्बन्धी पुस्तक विमोचन « News24 : Premium News Channel
भक्तपुरका निवा शाक्यहरुको ४ सय वर्ष अघिको इतिहास सम्बन्धी पुस्तक विमोचन
भक्तपुर । भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको सुनकोे ढोका (लुंःध्वाका) बनाउने ‘निवा’ शाक्यहरुको ईतिहास समेटेर नेपाल भाषामा लेखिएको “ख्यपया ‘निवा’ शाक्यतयेगु इतिहास” नामक पुस्तक विमोेचन गरिएको छ ।
भक्तपुरको चार सय वर्ष अघिको इतिहास समेटिएको पुस्तक प्राध्यपक सूवर्ण शाक्यले विमोचन गरेका हुन् । विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित प्रा.सूर्वण शाक्यले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका निवा शाक्यहरुको इतिहासका बारेमा बोल्दै उक्त पुस्तकले निवा शाक्यहरुको बारेमा धेरै जानरीदिने पनि बताए ।
पुस्तक भक्तपुरको खौमा निवासी आरती गुठी निवा संघका नायो (अध्यक्ष) संघरत्न शाक्यले लेखेका हुन् । पुस्तकमा भक्तपुरको चार सय बर्ष अघिको इतिहास रहेको लेखक शाक्यले जानकारी दिए ।
उनले सो पुस्तकमा भक्तपुरको बिश्व प्रसिद्ध लुंःध्वाका, (स्वर्णद्धार) ङाताःपोल्हँको गजुरलगायत बिभिन्न मूर्तिहरुको निर्माणमा भक्तपुरका निवा शाक्यहरुको भूमिका र योगदान महत्वपूर्ण रहेको विषयमा विभिन्न प्रमाणको आधार पुस्तकमा समेटिएको लेखक शाक्यले बताए ।
किताबमा शाक्य समुदायमा निवा शाक्य छ भन्ने धेरैलाई थाहा नभएको हुनाले जानकारीको लागि उक्त किताब निकालिएको लेखकका छोरा शाक्यन शाक्यले बताए । वास्तवमा निवा भनेको शब्द के हो ? कस्तो ब्यक्तिलाई प्रयोग गरिन्छ ? उनीहरु कहाँबाट आएका हुन् ? निवाहरुसँग भएको कला कौशल कस्तो हो ? भने बारे जान्न चाहनेहरुको लागि यो कितावले धेरै सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा त्रिरत्न शाक्य, प्रा.सिद्धिरत्न शाक्य, साहित्यकार तिलक प्रकाश कायस्थ, वौद्ध विद्वान रत्नसुन्दर शाक्यलगायतले पुस्तकबारे चर्चा गरेका थिए । आरती गुठी निवा संघले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकमा मल्लकालीन राजा विश्वमल्लदेखि रणजीत मल्लसम्मको इतिहास समेटिएको छ ।